Cabin Mhepo Sefa PCF6154C, China Cabin Mhepo Sefa PCF6154C Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - TAKUMI AUTO CHIKAMU
Cabin Air dhiza PCF6154C
mhando Chikamu nhamba setifiketi Kureba/Kureba/Kufara kunyoresa
CABIN AIR FILTER PCF6154C ISO/IATF16949 1.38(35mm)/9.47(241mm)/8.03(204mm) Chrysler 300 (2005-10) Dodge Charger, Guruva uye Odor
PSI Relief Anti-Drain basa zera
EHE EHE Tsvina Guruva OEM Standard Saizi
Mubvunzo: Sei Mainjiniya vachitanga neMhepo sefa zvinodiwa kutanga?
A: Nekuti ndiyo inonyanya kukosha sefa. Mhepo isina kusefa, ine inducted kusvibiswa, inokonzeresa kupfeka kweinjini.
Mubvunzo: Ndeupi mutsauko uripo pakati pemafuta emafuta anoshandiswa pane carbureted masisitimu achipikisa EF
A: Kazhinji iyo carburetted system inoshanda nekudzika kwakadzika uye ine yakaderera kuyerera. Masefa kazhinji ane naironi muviri. EFI mafirita ane simbi ane muviri, uye akagadzirirwa kubata yakakwirira kumanikidza uye kuyerera. Midhiya inogonawo kusiyana pakati pemasefa marudzi.
Mubvunzo: Chii chinonzi over pressure?
A: Kana iyo oiri yekumanikidza vharafu ikanamatira kwekanguva, inoisa iyo yese lubricating system kune yakanyanya kudzvinyirira. Pasi pemamiriro ezvinhu aya sefa yemafuta inowanzowedzera sezvo kuwedzera kumanikidza kunoedza kumanikidza sefa kubva muinjini. Mafirita eTakumi akavakwa kuti akwanise kumira katatu zvakajairika kushanda nesimba.
Q: Ndeupi musiyano uripo pakati pekuyerera kwakazara uye bypass mafuta sefa?
A: Kuyerera kwakazara ndiko uko 100% yemafuta ichipfuura nemu media imwechete isati yapinda muinjini. Mafirita eBypass anonyanya kudzora uye anotora chikamu chemafuta uye kusefa kunze tudiki tudiki tunokwanisa kana kupfuura nepasefa izere yekuyerera. Inowanikwa mune zvinorema basa zvikumbiro.
Mubvunzo: Chii chinonzi by-pass valve?
A: Kana iyo sefa yemafuta ikavharika, vharuvhu inovhura ichibvumira mafuta kuyerera mujini. Nekuti mafuta asina kusefa ari nani pane kusazora mafuta.
Mubvunzo: Chii chinonzi anti drain back valve?
A: Inomisa mafuta kubva pakubuda kwesefa uye magaraji emafuta kana injini yakavharwa uye inobatsira kukurumidza kuyerera kweoiri kuenda kune injini painotangira. Haasi ese mafirita anoda anti drain back valve nekuda kwekuvakwa kweinjini.
Mubvunzo: Chii chinonzi micron rating?
A: chiyero chehukuru hwepore mune sefa midhiya. Inoratidzwa sezvizvi 'Nominal' or 'Dzinofanira'. Nominal Rating inechekuita nechikamu chezvikamu pasaizi yakapihwa inogona kutorwa nesefa kureva. 10 microns pa90% zvinoreva kuti ichabvisa 90% yezvikamu gumi microns muhukuru. Mhedziso (Absolute) inoreva kubviswa kwezvikamu zvese pahukuru hwakapihwa micron uye hombe kureva. 10 micron absolute zvinoreva 20% yezvikamu 100 microns kana kupfuura zvichatorwa.
Mubvunzo: Chii chinonzi micron?
A: micron kuyerwa kwakaenzana nemirioni imwe yemamita.
Mubvunzo: Kuchinja kwesevhisi nguva dzose kunodiwa here?
A: Tichifunga kukosha kwekuita basa, hupenyu uye kuyerera, nguva dzose sefa shanduko ine yakanaka mhando sefa inopa kuita kwakadzama uye hupenyu hweinjini.
Mubvunzo: Chii chinonzi kuyerera?
A: Zviri nyore sei mhepo, mafuta kana mafuta inoyerera kuburikidza nesefa. Kuderedza kuramba kuyerera kunovimbisa kuti injini haife nenzara yemhepo, mafuta kana mafuta. Kuyerera kwakashata musefa kunonyima injini zvidikanwi zvadzo zvakakosha, zvichiita kuti ishande nesimba, kurasikirwa nemagetsi uye kugadzira inokurumidza kupfeka injini munguva pfupi.
Mubvunzo: Chii chinonzi sefa hupenyu?
A: Sefa inotora nguva yakareba sei isati yavhara. Hupfu-inobata simba resefa rinotarisa kuti hupenyu hwayo hurefu sei. Iyo bepa repamusoro-soro mukati mesefa ndiko kuwedzera tsvina yainobata uye iyo inogara kwenguva refu.
Q: Ko yakawanda pleated midhiya sefa bepa zvinoreva kusefa zviri nani?
A: Kazhinji sefa ine midhiya yakawanda inokwanisa kuteya tsvina yakawanda pane ine zvishoma. Zvikumbiro zvishoma zvinoreva midhiya midiki uye huwandu hwakaderera. Zvisineyi, midhiya inofanirwa kunge iine akakodzera resins uye makomisheni.
Mubvunzo: Chii chinonzi media?
A: Midhiya musanganiswa wemafibhi akasiyana akasunganidzwa pamwechete.
Mubvunzo: Chii chinonzi sefa kunyatsoshanda?
A: Chikamu chetsvina inobviswa nesefa. Pepa resefa kana kuti 'media' ndiyo inotara kuti mafuta, mweya kana mafuta ekufambisa anofanira kupfuura nepapi uye pakavharirwa tsvina. Izvo zvakanyanya kumonyoroka uye kutenderedza chidimbu chetsvina chinofanira kutora, zvakanyanya mukana wekubatwa.
Mubvunzo: Ndeipi basa resefa?
A: Kupatsanura kunze uye kudzivirira zvinogona kusvibisa zvimedu kubva pakupinda injini. Mhepo nemafuta - guruva zvidimbu uye unyoro. Mafuta - simbi particles, sludge uye carbon.